Zuva reVanyori. Vangani vatakaverenga? | Zvazvino Zvinyorwa
Mukadzi ari kunyora - Johannes Vermeer
Nhasi, Gumiguru 17, tiri kupemberera Zuva reVanyori, kunyange hazvo raigona kupembererwa zuva nezuva nekuti panogara paine chikonzero chekuverenga chimwe chazvo. Kune akawanda kwazvo ekusimbisa, kuongorora kana kukurudzira kuti isu hatife takapedza. Saka ini ndinotarisa nekukurumidza kune avo vakakwanisa kufarira, kundikurudzira uye kundikurudzira zvakanyanya. Pamwe tinogovana zvinoda.
Kubva kuSafo kana wechiJapan Murasaki Shikibu kusvika kune achangokunda wePlanet, Dolores Redondo, kwanaya yakawanda. Zvino, vashoma vevanoshamisa vadetembi uye vakabudirira, vanyori, vanyori vezvinyorwa, vatori venhau vatove murwi usina nhamba. Kunyangwe paine nguva dzose pane mubvunzo wekusingaperi we kana iwe ukaverenga zvakawanda kwavari kupfuura kwavari. Mumwe nemumwe ngaape mhinduro yake. Ngatitangei.
Ini ndinotenda kuti zvese zvehucheche hwedu, kana zvirinani zvese, Isu takaverenga ngano dzaSophia Fyodorovna Rostopchina, iye Countess weSegur. Uye ati kurei, zvirokwazvo hatipotse chero chiitiko cheVashanu. Vasikana kunyanya vanodzidza kwete chete muzvikoro zvedu, asiwo muSanta Clara naTorres de Malory, nevazhinji vavanodzidza navo vakagadzirwa nemunyori wechiRungu munyori. Enyd Blyton.
Uye isu hatisi kubva kuGreat Britain nekuti muchikoro chesekondari ichocho kuyaruka kanopfuura kamwe chete takawana vapfumi uye vakashongedzwa VaDarcy, iyo bland uye inoshungurudzwa asi paradigm yeakanyanya Victorian kudanana ari VaRochester. Kana iye akashinga uye akangwara Colonel Brandon achinyepedzera kune airota Marianne Dashwood. Zvese zvichibuda mundangariro dzaJane Austen naCharlotte Brontë, sezvavanotaura kwandiri, kuti pakati pehanzvadzi idzi naAusten uye nevanhu vazhinji vanoshamisa sezvavakafunga, ndinogona kutosanganisa Emily's Heatcliff naEmma mune imwe nyaya.
Isu takakwanisa kunakidzwa zvakaenzana nemasikirwo uye rudo rusina mhaka uye rwakachena pakati pehama mbiri dzisingakanganwiki, avo vakasika Emilia Pardo Bazan muchiGalician chake Iyo Pazos de Ulloa. Ndakave ndirikuda zvemhando iyo yandinoda kwazvo yekutenda kuna mambokadzi wezvakavanzika, kufungira uye mhosva, Agatha Christie. Hapana munhu anogona kuramba kuti mumba make hamuna sherefu nemabhuku euunganidzwa.
Ini handina kusiya bhuku randaifarira zvakanyanya, kunyange zvinyorwa zvekufungidzira zvisiri zvangu kuzvipira. Iyo Vakanganwa Mambo Gudú, ivo Ana Maria Matute ine nzvimbo ine rukudzo mundangariro dzangu.
Ipapo iwe unowana nekuverenga nyaya mune imwe nzira "yevakuru". Pakati peavo ini ndinosimbisa Anodiwa tenzi, ivo Rose Montero, uyo wandinotevedzera zvakanyanya mune rake basa semunyori. Iye naSoledad Puértolas ivo vanoumba rimwe remaviri andinofarira evanyori.
Rosa Montero naSoledad Puértolas
Zvinosuruvarisa hukama hwangu hausi hwepedyo nevanyori vechikadzi zvekare, ngatitii, midhiya kana vatengesi. Ndinofanira kureurura kuti ini handina kuwira pamashiripiti ehunhu hwaHarry Potter we JK Rowling, kana kundipa iyo vampiric fever ye decaf bloodsuckers kubva Stephanie Meyer (kwete kunyange murima re Ann mupunga). Uye handibvi pamumvuri we EL James. Asi ini ndinozviti zera rangu rakati uye kufarira kwangu kudiki kune iwo marudzi. Zvisinei, ndinobvisa ngowani yangu kubasa kwake uye kubudirira.
Sezvandinoibvisa pamberi pevazhinji vevanyori vematsotsi vanyori vakapinda munzira iyi yakaoma. Kutumidza mashoma, iyo Nordic Camilla Läckberg, Mari Jungstedt kana Åsa Larsson; french Fred vargas, ane muchengeti Adamsberg mumwe wevandinofarira; british Mo hayder (zvakakosha kuti uwane mutsvaga wake Jack Caffery) kana wechiGerman Nele neuhaus Vakagadzira yakakosha uye yakakodzera niche mune nhema panorama iyo yavanoshanda navo varume kutonga, kana kuda kutonga. Pano zvirokwazvo isu tine Dolores Redondo, iyo ine yayo Batzán trilogy uye yayo yazvino Planet zvakafanira kumira kunze.
Ini ndakasiya kwekupedzisira munyori akandikurudzira zvakanyanya kana ndichinyora imwe yenoveli dzangu. Ini ndinomuda chaizvo nekuti ndinorangarira ndichiona mabhuku ake pane masherufu emumba mangu kwenguva yakareba sezvandinogona kurangarira. Ndakaverenga mamwe ndichiri mudiki uye ndakaaverenga nguva pfupi yadarika. Ndezve Pearl S. Buck, munyori weAmerica, mutori wenhau, muratidziri uye munyori wechinyorwa vakapedza makore makumi mana vari kuChina. Akakunda Pulizter muna 1932 uye akapihwa mubairo weNobel wemabhuku muna 1938.
Zvisinei, ini ndaigona kuenderera nekuenderera asi ivo (isu) tinokodzera zvinopfuura chimwe chakakosha, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Zuva reVanyori. Vangani vatakaverenga?
Gaby buj akadaro
Rochester akabuda mupfungwa dzaJane Austen here? Chaizvoizvo? Uye ini uyo aigara ndichitenda kuti yakanga yagadzirwa naCharlotte Brontë ...
Pindura kuna Gaby Buj
Kutenda nekatsamba, Gaby. Yakagadziriswa uye kujekeswa. Izvo pakati pevakawanda mavara akanaka sezvavanogadzira imwe uye imwe, ini ndatovaisa iwo uye ndovasanganisa pasina nyadzi.
Kune zvekare kutengeswa kwepamusoro kunoverengwa zvakanaka. Ndinonyatsoda Matilde Asensi naJulia Navarro, kunyanya vekupedzisira, avo vane "Ndiudzei kuti ini ndiri ani" zvakaita kuti ndirasikirwe nemazuva nemaawa ekupedzisa "bhamba" rangu sekunge raive rakareruka homwe bhuku.
Maruja Torres, zvese mumapepanhau uye mumabhuku ake, ndeimwe kukosha kwechokwadi. Kutsamwa kwake uye zera rake zvinomutendera kuti ataure nezvezvinhu zvakawanda izvo vamwe vaisazobata kubata kana kurwadziwa kwekufa.
Handikwanise naLucía Etxebarria kana Mercedes Abad. Ini ndatova munhu mukuru zvekuti vanogona kundipa zvidzidzo.
Isabel, tinobvumirana paNavarro uye yake "Ndiudzei kuti ini ndiri ani" uye zvakare paTorres, iyo yandinoda zvakanyanya mumapepanhau. Zvakare muExebarría kana Abad. Oo, ndingadai ndakada kupa yakawanda nzvimbo kune vakawanda sezviripo.
Yakanakisa rondedzero, ichingoshayikwa, mumaonero angu ane mwero: Santa Teresa. Nenzira imwecheteyo, iwe unotsanangura sei mavara evanyori veBritish. Mhosva yevatatu hanzvadzi dzaBrontë, zvirinani izvo zvandinoziva nezvazvo, hapana mubvunzo kuti vane tarenda rakanyanya revanyori mukati memhuri imwechete, munhoroondo yezvinyorwa. Kwaziso.
Ongororo yakanaka kwazvo yevakadzi. Ndiani asina kuverenga nezve diki Enyd Blyton. Ndiani asina kufadzwa nevakadzi veVictorian. Uye ini ndinogovana newe, Mariola, mukadzi akanaka mutema ari kuita izvozvi kubva kumaoko echikadzi. Kupinda kwakanaka kwazvo !!!!
Ngarava dzinozivikanwa I. "Ndidane Ismael"